ANTSIRANANA : Niakatra 1000 ariary ny fiarakaretsaka, 400 ariary ny taksibe
Nisy fiantraikany amin’ ny fiainam-bahoaka ny fiakaram-bidin-tsolika farany teo. Araka izany dia tafakatra ho 1000Ariary ny fiarakaretsaka na taksy eto an-tampon-tanànan’ Antsiranana, raha 500 Ariary izany tao anatin’ ny sivy taona lasa izay. 8 mai 2018
Niakatra 400 Ar iaryihany koa ny taksibe raha 300 Ariary taloha teo.Araka voalaza fa noho ny fiakaram-bidin-tsolika dia voatery nampiakarina ihany koa ny taksy sy ny taksibe mba tsy hisian’ny fatiantoka.
Nanomboka ny alatsinainy 7 mey no nampihatra io saran-dalana io izay ara-dalana sy ara- panjakana.
Hita araka izany fa tsy voafehin’ny fanjakana ny fiakarana misy eo amin’ny solika ka ny vahoaka no misedra ny fahasahiranana.
Tsy misy fandeferana araka izany ireo mpitatitra nanomboka ny alatsinainy io satria tsy misy ady varotra 500 Ariary na dia tsy handeha lavitra ny mpandeha.
Raha nanontaniana mahakasika izany ny mpamily dia milaza fa misy manara-maso izay mampijanona ho 500 Ariary,ka mety miafara amin’ny fitoriana ataon’ ny mpitatitra sasany.
Hatreto dia mbola tsy nampiakatra ny versement ireo tompona taksy,araka ny voalaza hatrany.Mbola manavao amin’ny fiakaran’ny saran-dalana ireo mpamily na ireo mpandeha.Tsy ahitana ny manao tapa-dalana tahaka ny taloha ireo mpandeha noho ny fiakarana misy. Satria fantatra fa mazoto ny maka taksy na 100m ihany no aleha ireo mpandeha taloha teo mbola 500 Ariary ny sarany. Efa ela no nangatahan’ireo mpitatitra ny fiakaran’ity saran-dalana ity, ka nanaraka ny dingana rehetra izay nilaina, ka niafara amin’izao fiakarana 1000 Ariary.Hatreto aloha dia nilaza ireo mpamily fa mbola tsy nahitana fiovana ny asa fa tahaka ny andavanandro ihany ny fahazoana mpandeha.
Sehatra iray izay maneho ny fisian’ny fiakaram-bidim-piainana ihany koa ny fiakarana amin’ny saran-dalana misy eo amin’ny taksy sy taksibe izay ampiasain’ny vahoaka amin’ ny andavanandro.
Hita araka izany fa mitombo hatrany ny jaly mianjady amin’ny vahoaka, izay azo heverina fa avy amin’ny mpitondra no mahatonga izany.